Ungawutshintsha njani uMgangatho weVidiyo kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungawutshintsha njani umgangatho wevidiyo kwiYouTube?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 317
Ngaba uyazi ukuba unokukhetha isisombululo sevidiyo ngokwesantya se-intanethi? Iqonga leYouTube liyaqhubeka ukumangaza abasebenzisi balo kwaye ngeli xesha libandakanya ukhetho apho abantu banokusitshintsha isisombululo sayo nayiphi na ividiyo ethunyelwe kweli phepha.
Abasebenzisi banako khetha phakathi kwezigqibo ezininzi xa ubukele iividiyo kwi-YouTube. Nangona kuyinyani ukuba iqonga lenza uhlengahlengiso oluzenzekelayo ngokwesantya sonxibelelwano lwe-intanethi, uya kuba nenketho yokuguqula umgangatho nanini na ufuna kwaye apha sikubonisa ukuba ungayenza njani.
Iindidi ezahlukeneyo zomgangatho
Ukuba ukhe wazama ukutshintsha isisombululo sevidiyo ethunyelwe kuYouTube Usenokuba uqaphele ukuba iqonga libonelela ngeendlela ezahlukeneyo xa kuziwa ekwenzeni ezi ntlobo zezixhobo.
Isicelo se-YouTube sikuvumela ukuba udlale ukusuka kwi-144p ukuya kwi-4320p. Inqanaba lesisombululo sevidiyo likhethwe ngumsebenzisi ngamnye ngokwesantya sonxibelelwano lwe-intanethi onaso.
Ukuba uneselfowuni ye-HD ungadlala iividiyo ukuya kuthi ga kwi-720p, kodwa ukuba isixhobo sakho sikuvumela ukuba udlale umxholo opheleleyo we-HD emva koko unokukhetha ukuya kuthi ga kwi-1080p. Uhlobo lwesisombululo se-Youtube luhlengahlengisa kuxhomekeke kudidi lwescreen esisisebenzisayo.
Nazi i iintlobo ezahlukeneyo zomgangatho ezinikezelwa yiYouTube:
I-144p (isisombululo esincinci)
I-140p kunye ne-360p (isisombululo esisezantsi)
I-480p (isisombululo esiphakathi)
I-720p kunye ne-1080p (HD kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD)
I-1440p (i-Quad HD okanye isisombululo se-2K)
2160p kunye 4320p (4K kunye 8K isisombululo)
Guqula isisombululo seYouTube kwiselfowuni
Kakuhle kakhulu. Ngoku sifika kwinqanaba elinomdla kuthi kwaye kunjalo funda ukuba ungawutshintsha njani umgangatho wayo nayiphi na ividiyo ye-Youtube ngokulula nangokulula. Iindaba ezimnandi zezokuba siya kuba nakho ukwenza le nkqubo ukusuka kwisicelo esiphathwayo okanye nakwikhompyuter.
Abasebenzisi abanesicelo seYouTube esifakwe kwiifowuni eziphathwayo kwaye ufuna ukwazi ukuba ungawutshintsha njani umgangatho wevidiyo, ungayenza ngokulandela la manyathelo alula:
Vula Isicelo seYouTube kwiselfowuni yakho
Khetha nayiphi na ividiyo ofuna ukuyitshintsha
cofa ngaphezulu kwamachaphaza amathathu athe nkqo avela kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini
Cofa ku "Iinketho eziphambili"
Uya kufumana ezininzi iintlobo zezisombululo. Cofa ukhetho olukhethiweyo, yiyo ke loo nto.
Guqula isisombululo kwiPC
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abathanda ukonwabela i-YouTube kwinguqulelo yedesktop Uya kuba nethuba lokutshintsha umgangatho wokusombulula nayiphi na ividiyo ekhoyo kweli qonga.
Inkqubo iyafana ngokusisiseko nendlela eyenziwa ngayo kwisicelo esiselfowuni. Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, Apha siyakuchaza:
Vula Youtube kwikhompyuter yakho
Khetha ividiyo oyikhethayo
Cofa ku "ukuseta”(Umqondiso wevili)
Cofa apha mgangatho
Khetha phakathi kwazo zonke izigqibo ezikhoyo, kunye ne-voila.
1 Iindidi ezahlukeneyo zomgangatho
2 Guqula isisombululo seYouTube kwiselfowuni
3 Guqula isisombululo kwiPC
Cwangcisa iintengiso kwi-Instagram
Uluqwalasela njani ukhuseleko lweakhawunti yakho ye-Instagram